Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: tsy takatra ny vidin’ny mamy | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: tsy takatra ny vidin’ny mamy
Ny akondro ihany sisa no voankazo latsaky ny telo arivo ny vidin’ny iray kilao. Aiza intsony no ahafahan’ny ankabeazan’ny mponina ihinana mamy? Taona tena namokatra anefa ity 2018 ity, mamirapiratra toy izany anefa ireo karazana manga izay samy namoronana anarana vaovao. Mifaninana aman-doko midorehitra eo amin’ ny famelaran’ny mpivarotra azy miainga avy amin’ny manga vato kely toy ny voatabia ny habeny ka hatrany amin’ireo faran’izay vaventy kely foana dia anahatahaka ny lanjan’ny mananasy ny iray. Ny maro dia manao kilalao maso fotsiny amin’ny fitazanana azy, mangetaheta ambony lakana. Mandefitra tsy fidiny eo anoloan’ny tsy rariny. Olom-pirenena tsy afaka manandrana mivantana ny vokatry ny tany eto amin’ny tena. Na atao aza no tsy hiaro an’ireo mihoa-pefy, na mpangala-paiso sy mpanao hala-botry samihafa na ireo jiolahy mihetraketraka tsy mataho-tody amin’ny fampiasana herisetra mahatsiravina, azo heverina fa ny tsy fisian’ny rariny eto amin’ny fiarahamonina dia mamporisika azy ireny hirongatra amin’ny fampisehoana habibiana.
Nanapa-kevitra ny fitondrana amin’ny fanazavana ny làlam-baovao mandalo eny Soavimasoandro rehefa tonga ny haizina, mba ahafahan’ny fiara hisosa am-pilaminana. Arahaba soa. Aiza kosa ny fiarovana ny mponina ? Eo ihany moa ny tebiteby andro aman’alina noho ny tsy fisian’ ny fandriampahalemana. Tsy azo atao sary adino koa ankoatran’izany ny tsy fandrian-tsaina mikiky marain-tsy hariva ny olona maro noho ny fahasahirana eo amin’ny fikarohana an’izay kely azo hatokona. Maro ny olona mivaky loha mitady izay ho tsindrohana hataina raha avy eo. Misy very hevitra sy lany lainga eo amin’izany fizahana izany ka mionona tsy satry mandry fotsy. Mahagaga ny mbola fisian’ny olona ao anatin’ny fahasahiranana lalina nefa mbola velom-panantenana noho ny fahazoana tsipikely ka hampiara-peo hiredona hira fiderana « hitondra fanafody ny vato alatsako ho anao».
Mahaiza manetsa Ravaly hoy ny mpihira. Ho an’ny Krisimasy sy ny fitsenana ny taom-baovao tsy misy tokontaniny ny fieritreretana fanaovana fety. Tsy misy ny fahagagana azo antenaina indray andro. Eo anefa ny fifidianana ahafahan’ny tsirairay maneho ny safidiny. Malalaka ny safidy, samy manana ny heviny. Manan-danja hifefy ny fizotran’ny ho avy ny vokatry ny fifidianana. Adidy ho an’ny rehetra no manaiky an’izay tapaky ny maro an’isa arak’izay misongadina avy amin’ny fahamarinan’ny vokatra. Andraikitry ny tsirairay no mandray anjara ho fanomezan-danja ny hevitra tohanany, hasandratr’ilay olona ametrahany fitokisana.